DPWorld oo Jabuuti ugu Hanjabtay in ay sharikad kale hadaay ku wareejiso Dooraale Tallaab adag qaadayso! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DPWorld oo Jabuuti ugu Hanjabtay in ay sharikad kale hadaay ku wareejiso...
DPWorld oo Jabuuti ugu Hanjabtay in ay sharikad kale hadaay ku wareejiso Dooraale Tallaab adag qaadayso!
Waxaa Warbixinta ka soo baxday DPWorld lagu sheegay in iyada oo kaashaneysa hay’adda dhinaca Sharciga ee DCT,ay dacwad ka dhan ah Dowladda Jabuuti ka furayaan Magaalada London ee caasimadda Dalka Ingiriiska.
Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in sharikadda PIL oo laga leeyahay dalka Singapore ay heshiis kula gaartay maamulka Dekadda Dooraale kaddib markii bishii hore ay jebisay heshiiska DPWorld ay ku maamuleysay dekaddaasi.
Dowladda Jabuuti ayaa DPWorld ku eedeysay in ay la wareegtay qeybta go’aan gaarista Dekadda Dooraale iyada oo leh saami la eg 33%,halka ay 66% leedahay Dowladda Jabuuti,taasina aysan sharci ahayn.